ဖိလစ်ပိုင် ကို အပျော့ဆွဲ ဆွဲလာခဲ့တဲ လော်ပန်ကြီး ( အပျော့ဆွဲ ဆွဲလာ လိုက်တာ အခုဆို တရုတ်လူမျိုး ၄ သန်းကျော် ဖီလစ်ပိုင်ထဲ ရောက်နေကြပြီ….) – GaMone Media
ဖိလစ်ပိုင် ကို အပျော့ဆွဲ ဆွဲလာခဲ့တဲ လော်ပန်ကြီး ( အပျော့ဆွဲ ဆွဲလာ လိုက်တာ အခုဆို တရုတ်လူမျိုး ၄ သန်းကျော် ဖီလစ်ပိုင်ထဲ ရောက်နေကြပြီ….)
အမေရိကန် ပစိဖိတ် တပ်မှူးက ထောက်ပြလိုက် အပြီး၊ အထက် လွှတ်တော်က အတိုက်အခံအ မတ်က တိုက်တွန်းလို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးေ ပါ်လစီကိုပြန်စစ် ကြည့်ရာ ၃ နှစ်အတွင်း တရုတ်လူမျိုး ၄ သန်းဟာ ဖိလ စ်ပိုင်မှာ နေထိုင်ရော က်ရှိနေကြပြီလို့ သိလိုက်ရပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင် ကို အပျော့ဆွဲ ဆွဲလာခဲ့တဲ လော်ပန်ကြီး
VUA ခေါ်တဲ့ဆို က်ရော က်ဗီဇာကို အသုံးချကာ လူဝင်မှုက အရာရှိတွေ ကိုလာဘ်ထိုးပြီး ဝင်ခဲ့ကြတာ များပါသတဲ့။ နိုင်ငံခြားသား ပင်စင်စားတွေကိုပေးတဲ့ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာရဲ့ ၄၀% ကျော်ဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်နေကာ၊ အသ က်တွေက ၃၅ နှစ်ပဲ ရှိနေ ပါသေးတယ်။ လာဘ်ထိုးရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ ဖိလစ်ပိုင်ပီဆို ၄၀ ဘီလီယံရှိပြီး၊ တရုတ်တို့ဟာ ပြည်တွင်းက ဆိပ်ကမ်း၊ လေဆိပ်၊ စက်မှုဇုန်တွေမှာ ငွေအလုံးအရင်း နဲ့ဝယ်ရ င်းနှီးကာ monopoly economy လမ်းကြောင်းကို ဖော်ဆောင်နေကြပါတယ်။
တံငါသည်ေ ယာင်ဆောင် ထားတဲ့ တရုတ်စစ် သားတွေရဲ့ငါးဖ မ်းလှေတွေကို ကျူးကျော်လာ လို့ ပြန်မော င်းထုတ်ရတာ ဒီနှစ်ထဲ ရာကျော်နေပြီမို့၊ ခုလို ပြည်တွင်းမှာ လူ ၄ သန်းလောက်ရောက်နှင့်ေ နတာကဖြင့် တိုင်းပြ ည်လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ရပါတယ်လို့ အတိုက်အခံအမတ်က မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။
တရုတ်ဟာ နေရာတိုင်း မှာ စနစ်တကျ နယ်ချဲ့နေကြတာပါ၊ တိုင်းပြည်ကာ ကွယ်ဖို့တာဝ န်ရှိသူတွေက လာဘ်စားကာ ငွေမျက်နှာနဲ့ မမြင်ချင်ေ ယာင်ဆောင်၊ အာဏာရူးနေကြပြီး ကိုယ့်အလု ပ်ကိုယ် မလုပ်ကြရင် တိုင်းပြည်ပျက် စီးဒုက္ခတွေ့မှာကို စိုးရိမ်ရပါတယ်။
Credit;Zin Min Nyein
အေမရိကန္ ပစိဖိတ္ တပ္မႉးက ေထာက္ျပလိုက္ အၿပီး၊ အထက္ လႊတ္ေတာ္က အတိုက္အခံအ မတ္က တိုက္တြန္းလို႔ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေ ပၚလစီကိုျပန္စစ္ ၾကည့္ရာ ၃ ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ၄ သန္းဟာ ဖိလ စ္ပိုင္မွာ ေနထိုင္ေရာ က္ရွိေနၾကၿပီလို႔ သိလိုက္ရပါတယ္။
VUA ေခၚတဲ့ဆို က္ေရာ က္ဗီဇာကို အသုံးခ်ကာ လူဝင္မႈက အရာရွိေတြ ကိုလာဘ္ထိုးၿပီး ဝင္ခဲ့ၾကတာ မ်ားပါသတဲ့။ ႏိုင္ငံျခားသား ပင္စင္စားေတြကိုေပးတဲ့ အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာရဲ႕ ၄၀% ေက်ာ္ဟာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနကာ၊ အသ က္ေတြက ၃၅ ႏွစ္ပဲ ရွိေန ပါေသးတယ္။ လာဘ္ထိုးရာမွာပါဝင္ခဲ့တဲ့ေငြေၾကးပမာဏဟာ ဖိလစ္ပိုင္ပီဆို ၄၀ ဘီလီယံရွိၿပီး၊ တ႐ုတ္တို႔ဟာ ျပည္တြင္းက ဆိပ္ကမ္း၊ ေလဆိပ္၊ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ေငြအလုံးအရင္း နဲ႔ဝယ္ရ င္းႏွီးကာ monopoly economy လမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။
တံငါသည္ေ ယာင္ေဆာင္ ထားတဲ့ တ႐ုတ္စစ္ သားေတြရဲ႕ငါးဖ မ္းေလွေတြကို က်ဴးေက်ာ္လာ လို႔ ျပန္ေမာ င္းထုတ္ရတာ ဒီႏွစ္ထဲ ရာေက်ာ္ေနၿပီမို႔၊ ခုလို ျပည္တြင္းမွာ လူ ၄ သန္းေလာက္ေရာက္ႏွင့္ေ နတာကျဖင့္ တိုင္းျပ ည္လုံၿခဳံေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရပါတယ္လို႔ အတိုက္အခံအမတ္က ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါတယ္။
တ႐ုတ္ဟာ ေနရာတိုင္း မွာ စနစ္တက် နယ္ခ်ဲ႕ေနၾကတာပါ၊ တိုင္းျပည္ကာ ကြယ္ဖို႔တာဝ န္ရွိသူေတြက လာဘ္စားကာ ေငြမ်က္ႏွာနဲ႔ မျမင္ခ်င္ေ ယာင္ေဆာင္၊ အာဏာ႐ူးေနၾကၿပီး ကိုယ့္အလု ပ္ကိုယ္ မလုပ္ၾကရင္ တိုင္းျပည္ပ်က္ စီးဒုကၡေတြ ႕မွာကို စိုးရိမ္ရပါတယ္။
Previous post မုန္လာဥနီ ေဖ်ာ္ရည္ကို (၈) လ ဆက္တိုက္ မနက္တိုင္း စြဲစြဲျမဲျမဲ ေသာက္ၿပီး တဲ့ေနာက္ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ ရ တဲ့ မယုံနိုင္ စရာ အျဖစ္အပ်က္
Next post ဘယ်လိုလူတွေ မြန်မြန် ဆန်ဆန် ချမ်းသာလေ့ ရှိသလဲ … သင့်ကို လူချမ်းသာ ဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်း